लगभग चार हजार वर्षदेखि यस दमित भूखण्डमा छाँट-छाँटका र काँट-काँटका राजाहरूको जगजगी थियो । ती वंश, जन्म, लिंग र धर्मको नाताले स्वतः राज्यप्रमुख हुन्थे । योग्यता र क्षमता, लगन र नैतिक निष्ठाको कुनै अर्थ थिएन । अस्ति त्यो कुप्रथा विधिवत् तोडियो । जनताका छोराछोरीले जनताका छोरालाई राष्ट्रपति चुने । त्यो दिन, लामो समयको कठिन सङ्घर्ष, अकथनीय त्याग र अनेकन् आत्म-बलिदानबाट प्राप्त त्यो दिन, अखण्ड आनन्द र चौतर्फी हर्षोल्लासको दिन हुनुपर्ने हो । त्यो दिन स्वस्फुर्त विजयोत्सवको तुमुल ध्वनिले समस्त आकाश गुन्जायमान हुनुपर्ने हो । त्यो दिन मुलुकैभरिका सडक र डबलीहरूमा खुट्टा हाल्ने ठावैँ नहुने गरी नरनारीहरूको भीड लाग्नुपर्ने हो । त्यो दिन साँझ पटकाको पट्याक-पुटुक, झिर्भिmरेको झिलिमिली र घरघरै दिपावलीको तिरिमिरी हुनुपर्ने हो । दुर्भाग्यवश, त्यस्तो केही भएन । बहुमतीय भालेजुधाइ र संकीर्ण स्वार्थहरूको टक्करले हाम्रो दुर्लभ खुसीलाई धेरै नै खल्लो बनाइदियो । नयाँबानेश्वरमा, चुनावी परिसरबाहिर सडकमा मानिसहरूको एउटा लिखुरे झुन्ड जुटेको थियो । छाँटले ती सबैजसो कांग्रेसी थिए । धेरैजसो मधेसी कांग्रेसी, छिटफुट पहाडी कांग्रेसी । उत्सुक नजरले नियालेर हेरेँ, त्यो झुन्डमा एमाले एकजनासम्म पनि थिएन । लाग्यो, एमालेका एउटा आँखामा हाँसो होला, अर्कोमा आँसु । माओवादीसँग साटो फेर्न पाएकोमा हाँसो, माओवादीको रिसले कांग्रेस-फोरमका चरणमा आप\_mनो सर्वस्व सुम्पिदिएकोमा आँसु । आँसु र हाँसोको जोड-घटाउमा एमालेलाई हात लाग्यो करिबन शून्य । न लाभ न गौरवको त्यो घडीमा सके बल्खुदरबारको कौसीमा बसेर एमाले उदास मुद्रामा झोक्राइरहेको थियो होला । अनि केको हर्षबढाइँ गर्न निस्क्योस् बरा खुला सडकमा ?
कांग्रेसीहरूका नारामा राष्ट्रपतिको उचाइ र व्यापकता, शान र गरिमा उति साह्रो देखिएन । तिनले कांग्रेसी जितका संकुचित नारा लगाए । तिनले ‘कांग्रेसी हाई-हाई’को मिठो र ‘प्रचण्ड बाई-बाई’को तीतो पोखे । मानौँ, त्यो चुनाव राष्ट्रपतिको होइन, कांग्रेसपतिको हो । मानौँ, त्यो चुनावमा कांग्रेसका भागमा जितैजित र माओवादीका भागमा हारैहार पर्‍यो । मानौँ, विजयी राष्ट्रपति कांग्रेसहरूका पेवा र बाँकीहरूका परचक्री हुन् । मानौँ, राष्ट्रपतिको चुनाव गणतन्त्रको जितको उद्घोष होइन, अर्को युद्धको उद्घोष हो । त्यो दिन, खुसीको आवरणभित्र त्रासैत्रास भरिएको त्यो दिन, युद्धको उद्घोषको गन्ध चारैतिर व्याप्त थियो । तिलस्मी गठनबन्धका छोटेनेताहरूका वचनमा युद्धको नजानिँदो उद्घोष थियो । स्वनामधन्य बौद्धिकहरूका कथनमा युद्धको अप्रत्यक्ष उद्घोष थियो । धेरैजसो बिजुली सञ्चारमाध्यमहरूका प्रस्तुतिहरूमा युद्धको डरलाग्दो उद्घोष थियो । यी सबैले एकनासका मुद्रामा, एउटै भाकामा दिनैभरि एउटै कुराको रट लगाए । माओवादीको मेख मारिया ! माओवादीको दम्भ तोडियो ! माओवादीका सिङ भाँचियो । माओवादीलाई सबक सिकाइयो ! यी उद्गारहरूमा प्रतिशोधको आगो हुर्हुरी बलेको थियो । यो विनासकारी आगोले भनिरहेझैँ लाग्थ्यो— माओावदी पहिलेकै जंगल जाओ, हामी पहिलेझैँ खाओवादको रक्षा गर्छौर्ँ !
This entry was posted on July 23, 2008 at 12:02 am and is filed under बिभिन्न पत्रपत्रीका.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.